सुरेन्द्र पाण्डेले रोक्दा रोक्दै संसद सुरु हुनुअघि भिम रावलले किन दिए त राजिनामा? - हिमाल दैनिक
सुरेन्द्र पाण्डेले रोक्दा रोक्दै संसद सुरु हुनुअघि भिम रावलले किन दिए त राजिनामा?
काठमाडौँ ३ श्रावण २०७८, आईतवार १६:४९
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले संसद पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रो पटक पुनःस्थापना भएपछि प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशन बसेका बेला रावलले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
अघिल्लोदोस्रो पटक पुनःस्थापना भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु
पछिल्लोहामी राजनीतिक दलहरु एक अर्काका शत्रु होईनौ: प्रधानमन्त्री देउवा(पूर्ण पाठ)